Ochwepheshe be-PR: Awukhululiwe ku-CAN-SPAM | Martech Zone
Ochwepheshe be-PR: Awukhululiwe ku-CAN-SPAM
ULwesibili, April 20, 2010 ULwesibili, May 10, 2016 Douglas Karr
Isenzo se-CAN-SPAM siphume kusukela ngo-2003, nokho ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi qhubeka nokuthumela ama-imeyili amaningi nsuku zonke ukukhuthaza amaklayenti abo. Isenzo se-CAN-SPAM sicace bha, sihlanganisa "noma yimuphi umlayezo we-elekthronikhi inhloso yawo okuyisikhangiso noma ukuthengiswa komkhiqizo noma insizakalo yezentengiso."
Ochwepheshe be-PR abasabalalisa ukukhishwa kwabezindaba kuma-blogger bayakufanelekela nakanjani. I- Imihlahlandlela ye-FTC kucacile kuma-imeyili athengiswayo:
Tshela abamukeli ukuthi bangakhetha kanjani ukuthola i-imeyili ezayo evela kuwe. Umlayezo wakho kufanele ubandakanye incazelo ecacile nebonakalayo yokuthi umamukeli angakhetha kanjani ukuthola i-imeyili evela kuwe ngokuzayo. Bamba isaziso ngendlela elula kumuntu ojwayelekile ukuyibona, ayifunde, futhi ayiqonde.
Usuku ngalunye ngithola ama-imeyili avela kubachwepheshe bezobudlelwano bomphakathi futhi nabo ungalokothi unendlela yokuphuma. Ngakho… ngizoqala ukubabophezela futhi ngigcwalise ifayili Isikhalazo se-FTC nge-imeyili ngayinye engiyitholayo engenayo indlela yokuphuma. Ngingancoma amanye ama-blogger ukuthi enze lokhu futhi. Sidinga ukubamba labo ngoti baphendule.
Iseluleko sami kubachwepheshe be-PR: Thola umhlinzeki wesevisi ye-imeyili futhi uphathe uhlu lwakho nemiyalezo ngqo kusuka lapho. Angikukhathaleli ukuthola ama-imeyili afanele, kepha ngithanda ithuba lokukhetha okungahambelani.
Tags: i-can-spamphonsa i-imeyiliukufaka imeyiliimigodiprama-pr pitchesezimayelana Nomphakathiugaxekile
IHhovisi Lakho, Ikheli Lakho, Umkhiqizo Wakho
Ngo-Apr 21, i-2010 ku-8: 27 AM
Kunombuzo ohlukile lapha, othi, “kungani labo bantu be-PR bengaqoki imigodi ehambisanayo?”
Njengomuntu we-PR ngokwami ​​(angikaze ngize kuwe, noma kunjalo), ngiyawucabanga umqondo wokuqhuma kwe-imeyili okukhulu. Umkhuba omuhle kakhulu uyaqhubeka nokwazi izethameli zakho nokwenza imigwaqo ebakhangayo, kunokuba ufafaze futhi uthandaze.
Okuthunyelwe kwakho kuholela embuzweni wokulandela-ke - ngabe kufanele ngabe sibeka umbandela othi “Ngicela ungitshele uma ungathanda ukungangizwa” —umugqa wokugcina ekupheleni kwawo wonke ama-imeyili abhekiswe kubantu ngabanye?
Ngo-Apr 21, i-2010 ku-11: 35 AM
Sawubona Dave! Okungenani, kufanele kube nomugqa lapho. Ukuthi i-imeyili ibhekiswe ngawodwana noma cha akusho ukuthi akuyona i-SPAM. Akunasayizi wohlu 'oluncane' lwe-imeyili esuselwa kwezentengiso. 🙂
Inqobo nje uma kungeyona eyomuntu futhi ingeyokuphromotha ngokwemvelo, ngikholwa ukuthi ochwepheshe be-PR kufanele bathobele.
Ngo-Apr 21, i-2010 ku-2: i-02 PM
Ngicabanga ukuthi unephuzu elihle. Ungacabanga ukuthi ngesinye isikhathi ochwepheshe be-PR bangafunda ukuthi badinga ukumaketha amaklayenti abo ngokususelwa ebudlelwaneni obuqinile esikhundleni se-Push media… Kufanele okungenani bazi ukuthi akufanele ucasule i-blogger enezithameli 😉
Ngo-Apr 24, i-2010 ku-9: 15 AM
Ngabe ukhona umlando wokuthi kungakanani ukwephulwa kogaxekile okungasetshenziswa kuze kube yimanje yizinhlawulo eziqoqiwe?
Ngo-Apr 27, i-2010 ku-2: i-01 PM
Ukuthobela i-CAN-SPAM kufanele kube ibha elula yokuqeda, kepha kukhona izinzuzo ezithile ezihlukile zenqubo ejwayelekile ye-PR uma uphoqelela ukuthobela kweqiniso. Ukungeza isixhumanisi sokuzikhipha ohlwini nekheli lakho lendawo kufanele likuthumele kakhulu endleleni eya lapho ufuna ukuba khona futhi wonke umuntu osebenzela i-PR kufanele akwenze lokhu. Kodwa-ke, ngokomthetho ngaphansi kweCAN-SPAM, uma umuntu engabhalisanga awusoze wamthumelela i-imeyili futhi, ngaphandle kokuthi babuye bangene. Ungabheka amaklayenti ahlukene njenge "imigqa ehlukene yebhizinisi" enza uMthetho njengoba intatheli ingabulala indaba kwiklayenti elilodwa , kepha cabanga ukudedelwa kwakho komunye njengokuchitha. Futhi, njenge-ejenti (esebenza njengomshicileli) womkhangisi, kuzodingeka wabelane ngokukhishwa kwakho kokuphuma nomkhangisi (iklayenti lakho) ukuze bangathumeli kulelo kheli le-imeyili noma kube inkinga enkambisweni ye-PR. Ungaphikisana nokuthi awuthengisi umkhiqizo obuzwayo entathelini njengomthengi wokugcina, ngakho-ke ngokomthetho uthumela i-imeyili yolwazi noma yokuthengiselana. Futhi uma othile eshicilela imininingwane yokuxhumana ngenhloso yokuthola ukukhishwa kwabezindaba, kunemvume ebekiwe. Izingqwembe lapha zilungile ukuthi konke kumayelana nokukhomba futhi ngaphezu kwakho konke ukuhambisana nentatheli. Ugaxekile usesweni lombukeli. Imicabango emisha nje ye-CAN-SPAM yosuku!
Ngo-Apr 27, i-2010 ku-2: i-10 PM
Todd- Ngiyazi ukuthi kube nokushushiswa okungaphezu kwe-100 kwe-Can-Spam. I-FTC ingamangalela kanye nama-State AG, nama-ISP afana ne-AOL angamangalela ngaphansi kwe-Can-Spam. Ngakho-ke izinkampani ezinjengeMicrosoft zinqobile umonakalo omkhulu ovela kubadlali abenza ubugebengu ngogaxekile futhi ngibonile i-FTC ithola noma yikuphi kusuka ku- $ 55,000 kuya ngaphezulu kwe- $ 10 million. I-Facebook ithole imiklomelo emikhulu engena cishe ku- $ 80 million. I-flipside ukuthi imiklomelo eminingi ayikaze iqoqwe. Futhi uphenyo oluningi luphela ezindaweni zokuhlala ngaphandle kokushicilelwa kwabezindaba, ngakho-ke inani langempela lezenzo zokuphoqelela lingabonakala lingenakubalwa. Empeleni ngizobuza ihhovisi labo lemininingwane yomphakathi ngalokhu futhi ngibone ukuthi yini engingakumba. Halala!